संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश आएको १२ घण्टा नबित्दै नेपाली सेनाले मुख खोल्यो, कसलाई के भन्यो ? — Sanchar Kendra
संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश आएको १२ घण्टा नबित्दै नेपाली सेनाले मुख खोल्यो, कसलाई के भन्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन र आकलन गरिरहेको जनाएको छ । आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकाबारे पूर्णरुपमा जानकार रहेको जनाउँदै सेनाले प्राप्त जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न संगठन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
इजलासले राजनीतिक दलभित्रको विवाद सम्बन्धित दलको विधानभित्रबाटै समाधान हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको विवादका कारण सरकार सञ्चालन असहज भएको एवं अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने व्यहोरा आफ्नो लिखित जवाफमा पेश गरेको सन्दर्भमा इजलासले त्यसको समाधान प्रतिनिधिसभा विघटन नभई दलकै विधानअनुसार आन्तरिक विवादको समाधान खोज्नुपर्ने प्रस्ट्याएको हो ।
तानाशाह टिक्दैनन् भन्ने सन्देश : पूर्वन्यायाधीश केसी
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ‘कार्यकारी प्रमुखले संविधान नाघे हामी छौं है दण्ड दिने भनेर अदालतले चेतावनी दिएको’ बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वन्यायाधीश केसीले प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै लिकबाहिर लगेको संविधानलाई तानेर सर्वोच्चले सही ठाउँमा ल्याइदिएको बताएका हुन् । यस्तोछ उनको भनाइ उनकै शब्दमा। ..
”संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशलाई त स्यालुट ठोक्नुपर्छ । संविधानवाद र कानुनी शासनविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो, त्यो बहुमतको अहमता थियो । तानाशाही प्रवृत्ति थियो, निरंकुश चरित्र थियो, संविधानलाई लिकबाहिर लगिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो असंवैधानिक र लिकबाहिर लगिएको संविधानलाई तानेर सर्वोच्चले सही ठाउँमा ल्याइदिएको छ ।
यो फैसलाले भोलि आउने जोसुकै प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको घमण्ड देखाउँदा र असंवैधानिक कदम चाल्दा अदालतले कस्तो दण्ड दिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । कार्यकारी प्रमुखले संविधान नाघे हामी छौं है दण्ड दिने भनेर अदालतले चेतावनी दिएको छ । संविधानवाद र विधिको शासन अगाडि तानाशाही कोही पनि टिक्दैनन् भन्ने सन्देश सर्वोच्चको फैसलाले दिएको छ ।
यदि अदालतमा निडर र साहसी न्यायमूर्ति नभइदिएको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले मुलुकलाई खाल्डोमा हाल्नुहुन्थ्यो । कतिसम्म घमण्ड भने ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा ३ जना बसेर रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न कानुन नै संशोधन गर्नुभयो । आफैं संसद् विघटन गर्ने, आफैं घर भत्काइदिने ? कानुन कसरी लिकमा जान सक्छ यसरी ? देशप्रति अलिकति पनि माया छ भने ओलीजीले पदमा बस्ने कुनै नैतिक साहस राख्नुहुन्न । उहाँले सांसदसमेतबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।”
संविधान क्षतविक्षत हुनबाट जोगियो : वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएर मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासन जीवितै छ भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसललापछि प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संविधान सही लिकमा आएको बताएका हुन् ।
यस्तोछ उनको भनाइ उनकै शब्दमा। ..
”प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएर मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासन जीवितै छ भन्ने सन्देश दिएको छ । संविधान सही लिकमा आएको छ । संविधानवादसँग निरंकुशता र अधिनायकवादी चरित्र हार्छ भन्ने पनि यो फैसलाले सही सावित गरिदियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थिएन भने संविधान लिकमा हुँदैनथ्यो, अधिनायकवादी र निरंकुशतापक्षधर हावी हुन्थे । संविधान क्षतविक्षत हुनबाट अदालतले जोगाइदियो ।
मुलुकमा जतिजति बेला असंवैधानिक कदम चालिएका छन्, त्यसत्यस बेला सर्वोच्चले संविधानवादका पक्षमा अग्रगामी फैसला गर्दै आएको छ । यो फैसलाले आफ्नो विगतको विरासतलाई पनि सर्वोच्चले कायम राखेको छ । शाही आयोग खारेजी होस् वा २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर, दुवै ऐतिहासिक थिए । २०३५ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतसँगको विवाद हुँदा पनि अदालतले संविधानको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।”